Al-Nadiif Oo iscasilaad Ku Dhawaaqay iyo Khilaaf U dhaxeeya Dowladaha AMISOM Ku Bahoobay Warbixin.
Thursday June 19, 2014 - 16:31:35 in Wararka by Super Admin
Max'med Saalax Al-nadiif wakiilkii gaarka ahaa ee Ururka Midowga Afrika ee arrimaha soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu isaga tegay xilkii uu hayay.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Alnadiif ayaa lagu xaqiijiyay in uu iska casilay xilkii uu hayay muddo laba sanadood ku dhaw balse lama sheegin sababaha uu isku casilay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalay wadamada ciidamadoodu kusoo duuleen Soomaaliya uu salka ku hayo iscasilaadda Alnadiif.
Sarkaalkan isacasilay ayaa bilihii lasoo dhaafay xusul duub ugu jiray in ciidamada gumeysiga Kenya ee Kismaayo ku sugan lagu bedelo ciidamo kale oo Burundi iyo Siiraaliyoon ka socda waxaana tallaabadaasi kasoo horjeestay Kenya iyo Uganda.
Al-Nadiif waxay isku dhawyihiin dhanka siyaasadda Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Cumar Gelle,warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in saraakiil kale oo katirsan AMISOM ay iyana qorshaynayaan in ay iscasilaan.
Afhayeenka AMISOM ee Jabuutiyaanka ah Col,Cali Xaamud ayaa wareysigii ugu dambeeyay ee uu bixiyo ku sheegay in dowladda Jabuuti ay ka biya diidantahay qaabka loo maamulayo ciidamada shisheeye ee soomaaliya kusoo qulqulaya gaar ahaan 400 askari oo dowladda Uganda ka socda kuwaasi oo Muqdisho lageeyay si ay u ilaaliyaan xafiisyada Q.Midoobe.
Dowladaha Calooshood u shaqeystayaasha Afrikaanta ah ee duullaanka kusoo qaaday soomaaliya ayaa bil walba lacago malaayiin dollar ah ka hela Mareykanka iyo reer Yurun waxaana lawada sugayaa waqtiga uu qandaraasku ka dhamaan doono oo ay Soomaaliya isaga huleelayaan.
Dowladaha AMISOM ku mideysan ayaa kala aragti iyo kala hadaf ah balse waxa kaliya ee isku haya ayaa ah sandareerada ay ka qaataan reer galbeedka iyo shareeca ladirirka.
Max’med Saalax alnadiif wuxuu udhashay wadanka Jaad isagoona muddo sanada ah kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda wadankaasi
Go’doominta ay ciidamada mujaahidiinta xarakada Al Shabaab saareen magaalooyinka ay qabsadeen shisheeyaha Soomaaliya kusoo duulay ayaa qeyb ka ah caqabadaha adage e Al Nadiif soo wajahay xilligii uu xilka hayay.
Ciidamada AMISOM oo rasaas khasaara dhalisay ku furay Suuq ganacsi oo kuyaal Muqdisho.
Kulan udhaxeeya Farmaajo iyo labo kamid ah Hoggaamiyaasha sida aad ah umucaaradsan oo Furmay.
Mike Pompeo oo booqanaya dowladaha Carabta ee Yahuudda laheshiiyay.
Saldhigga ciidanka AMISOM ee deegaanka Lambar60 oo weerar lakulmay.
9 katirsan ciidamada AMISOM oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay Sh/hoose.